နိုင်ငံတကာ, 12 ဒီဇင်ဘာ 2017
ကမ္ဘောဒီးယားရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဥရောပသမဂ္ဂ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရုပ်သိမ်း
ကမ္ဘောဒီးယား အဓိက အတိုက်အခံ ပါတီကို မကြာခင်က ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အပေါ် တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဥရောပ သမဂ္ဂက ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
New York မြို့အချက်အချာကျတဲ့ Port Authority ဘက်စကားဂိတ်မှာ တနင်္လာနေ့က ပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာ မသင်္ကာသူကို ရဲက ဖမ်းမိထားတယ်လို့ New York မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မသင်္ကာသူအပါအ၀င် လူတချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ အကြမ်းဖက်ကြံစည်မှုလို့ မြို့တော်ဝင်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု စွပ်စွဲခံရသူ Trump နုတ်ထွက်ပေးဖို့ အမတ် ၄ဦး တောင်းဆို
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump အနေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့အတွက် ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်ပေးဖို့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၄ ဦးက တနင်္လာနေ့မှာ တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။
ဆီးရီးယားရှိ ရုရှားတပ်တွေ သိသာစွာ ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ Putin အမိန့်ထုတ်
ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကို သိသိသာသာလျှော့ချဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ ရုရှားသမ္မတ Vladimir Putin က မနေ့ကပဲပြောလိုက်ပါတယ်။
11 ဒီဇင်ဘာ၊ 2017
နယူးယောက် ကားဂိတ် ပေါက်ကွဲမှု သံသယရှိသူတဦးဖမ်းမိ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့က သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အာဏာပိုင် အဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲတဲ့ ခရီးသည်တင်ကားဂိတ် Port Authority Bus Terminal အနီးမှာ အခု မနက်ပိုင်း ပေါက်ကွဲမှုတခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး သံသယရှိသူ တဦးကို ဖမ်းထားကြောင်း နယူးယောက် ရဲအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဂျေရုဆလင်ကို အစ္စရေးမြို့တော်အဖြစ် အမေရိကန်သမ္မတက သတ်မှတ်လိုက်တဲ့နောက် အာရပ်နဲ့ မူဆလင်ကမ္ဘာတလွှားမှာ ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာပဲ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကို ပါလက်စတိုင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ဖို့ ပြင်သစ်သမ္မတကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Zlatica Hoke ရဲ့ သတင်းလွှာကို ကိုသားညွန့်ဦး တင်ပြထားပါတယ်။
တောမီးအကြီးအကျယ် လောင်ကျွမ်းမှုတွေ ကြုံရလေ့ရှိတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်က ပူပြင်းခြောက်သွေ့မှုနဲ့ အာတိတ်ဒေသက ရေခဲတွေ အရေပျော်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြား ဆယ်နွယ်မှုရှိနိုင်တဲ့အကြောင်း သုတေသန လေ့လာချက်တခုက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ Elizabeth Lee ပေးပို့တဲ့သတင်းကို ကိုအောင်လွင်ဦး တင်ပြထားပါတယ်။
အိုင်အက်စ် စစ်သွေးကြွတွေဟာ သူတို့ အဓိကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ဆီးရီးယားနဲ့ အီရတ်ကနယ်မြေတွေ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးနေရချိန်မှာပဲ သူ့တို့ရဲ့ဆိုင်ဘာ စစ်ပွဲမှာလည်း ရှုံးနိမ့်နေတာပါ။ အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ VOA သတင်းထောက် Henry Ridgwell ရဲ့ သတင်းလွှာကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက် တင်ပြထားပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၁၂. ၁၁. ၂၀၁၇
အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဥရောပနိုင်ငံတွေလည်း သံရုံးတွေကို ဂျေရုဆလင်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ မျှော်လင့်တဲအကြောင်း အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ပြောဆိုပါတယ်။